Sangano rekubatana kwesimbi muSpain | Ehupfumi Zvemari
Kutaurirana kwezvibvumirano zveruzhinji yanga iri nyaya yakakosha kutariswa nevashandi vanobata zvinhu izvi mukati meakasiyana mabasa ebasa uye yawana mukurumbira nekuda kwekuti kutaurirana kunonyanya kukurukurwa nevatauri uye kuti vanotora nguva yakareba kusvika pachibvumirano, kudzamara vasaina.
Izvi zvibvumirano zvevashandi avo vari pamusoro pekudzora nekudzora mashandisirwo esimbi mukati menzvimbo dzakasiyana munyika, izvo zvakarongwa nekurongedzwa nevatauri vakasiyana mukati medunhu uye vanosvika kubvumirana muchibvumirano munguva yakatarwa.
El chinangwa chikuru ndeche: kurerutsa iyo kubatana kwekutaurirana mune yesimbi chikamu, chinangwa icho masangano nevashandirwi vakazvimisikidza pachavo, ndosaka vakasaina chibvumirano chinozivikanwa sechibvumirano chevashandi vemaindasitiri, gwaro rinosanganisira kutaurirana kwezvinhu zvakajairika kudzora njodzi dzebasa uye nhanho dzekuenzana mukati memakambani, izvo zvinosiya izvozvi, zvedunhu rematunhu, zvimwe zvinhu zvakaita semubhadharo kana sangano rebasa.
1 Nei paine chibvumirano chekudzora kushandiswa kwezvinhu zvakajairika?
2 Chii chakanyatsorongedzwa mukati mezvibvumirano zvesimbi pamwe?
2.1 Chekutanga mamiriro chibvumirano cheindasitiri, tekinoroji uye masevhisi esimbi chikamu muSpain
3 Chii chinonzi CCOO pamusoro pazvo?
4 Zvikonzero zvakatadzisa chibvumirano chakabatana
Nei paine chibvumirano chekudzora kushandiswa kwezvinhu zvakajairika?
Maitiro echibvumirano, epagore ekushanda maawa uye mamiriro ekuenzana; Izvi ndizvo zvimwe zvezvinhu izvo, kubva zvino zvichienda mberi, vemabhizimusi esimbi nemasangano enharaunda anongotaurirana kamwe chete, zvichienzaniswa nekatatu kare: muzvibvumirano zveHuesca, Teruel neZaragoza.
Izvi zvichabatsira kurerutsa uye kubatanidza mubatanidzwa wekutaurirana, nekuti mune izvo zvinhu zvaiwanzoitika, uye mukuwedzera pakuve zvakajairika ivo havasi ivo vanopokana, asi kwaive kutaurirana kweprovince kwezvibvumirano.
Nyaya dzakadai semubhadharo kana nguva yekuwedzera inongogara yakasarudzika padanho repurovhinzi. Nesungano yechibvumirano che Aragon indasitiri yesimbi danho rekutanga rakanangana neramangwana rakatarwa, zvekuti rimwe zuva pachave nechibvumirano chimwe mukati menzanga. Chikamu chinosanganisira pakati pevamwe indasitiri yemotokari, mafayimi, pombi dzemvura kana kugadzirisa zvitoro, uye zvinoshandisa vanhu vangangosvika zviuru makumi mana munharaunda. Mapeji ari kuwedzerwa pachibvumirano zvishoma nezvishoma kuvhara misoro yakawanda uye yakakosha.
Magungano akasiyana izvo zvakagadzirwa mukutungamira uye kudzora kwezviitiko zvakasiyana zvinoenderana ne kushandiswa kwesimbi mumatunhu akasiyana, Vauya kuzoshanda nenzira yakanaka uye chikonzero chikuru chekumwe kutaurirana kunoitwa kudzora kodzero dzehunyanzvi, pamwe nezvisungo zvekuti munhu anofanirwa kuve mushandi uye kubata zvinhu zvakaita sesimbi.
Zvibvumirano zvakasiyana zveboka zvine chekuita nemutemo wekushandiswa kwesimbi basa sekutonga kune zvinoitwa zviitiko zvakasiyana, senge pombi dzemvura, Hardware, zvishongo, mwenje, zvichingodaro.
Zviripachena pane zvakafanana mune iyo akasiyana esimbi magungano izvo zvakasainwa nevatauri, uye izvi zvakafanana zvinoshamisa, asi isu tinofanirwa zvakare kutaura kuti misiyano iyi inonyanya kuzivikanwa pakati penzvimbo dzakasiyana umo zvibvumirano izvi zvakaumbwa nekusainwa.
Chii chakanyatsorongedzwa mukati mezvibvumirano zvesimbi pamwe?
Kune mimwe mitemo yakasiyana nezvibvumirano zvakasiyana izvo zvinokurukurwa mukati mehurukuro kune zvibvumirano zvakabatanidzwa, iyo inobatsira kunyatso kutonga uye kudzora zviitiko mune simbi inoita basa rakakosha. Izvo zvinotsvakwa ndezve kunyanya kudzora mashandisiro, mamiriro ezvinhu anoitwa zviitiko, kugadzirwa uye nguva yekugadzira, zvese izvi kuitira kuti mushandi ateedzere iyi mirawo kune tsamba kuti ive yakachengeteka pese painenge ichiitwa chiitiko kana basa.
Vashandi vanofanirwa kuve neruzivo rwakakwana rweizvi zvibvumirano, mitemo yavo, kushanda uye nguva yavanofanira kuzadzikiswa. Zvibvumirano zvakasiyana zvevashandi zvinoreva mamiriro akasiyana, uye zvichienderana nenzvimbo kana nharaunda inowanikwa mushandi, iko kushanda kana kushanda kwechibvumirano chevashandi kuchasiyana.
Chekutanga mamiriro chibvumirano cheindasitiri, tekinoroji uye masevhisi esimbi chikamu muSpain
Yakasainwa musi indasitiri chibvumirano chekutanga chehurumende, iyo inobatsira kusimbisa kubatanidzwa kwekutaurirana mumatunhu akasiyana enyika.
Izvo zvibvumirano zvichave nehunhu hwavo hwepakutanga, izvi kunze kwechibvumirano chinoratidza kuti kuenderera kwavo kune muganho.
Nekubatsirwa kweichi chitsva simbi yebazi chibvumirano chevashandi, Zvichange zviri kuona kuti mihoro inobvumiranwa muchibvumirano chega chega zvichienderana nedunhu rakasainwa, izvi zvinobatsira kana chibvumirano chikarega kushanda uye kushanda kwacho kuchizopera, nenzira iyi vashandi vacharamba vachigamuchira zvavakabvumirana. muhoro pasina kana dambudziko.
Izvi zvinobatsira vashandi vanochengetedzwa kubva kurudzi rupi zvarwo rwerusarura Muchiitiko chekuti muhoro wavo wavakatenderana usati waunzwa, pamwe nerutsigiro kumakambani akasiyana anotarisira kupa masevhisi akasiyana siyana kune vatengi, mukana wekutaurirana nekusvitsa zvibvumirano zvinobatsira mapato ese kugutsikana nezvibvumirano zvichaitwa.
Iyo UGT inotaura kuti kusainwa kwechibvumirano kukunda kunoshamisa uye vanozviona sechinhu chakakosha munhengo yemubatanidzwa, izvo zvinobatsira vashandi kuti vakure zvirinani mukati mekambani yesimbi.
"UGT inotaura zvakare kuti," Inosanganisira zvinhu zvitsva senge ultra-chiitiko kana huchokwadi zvakabvumiranwa muzvibvumirano zvepasi, izvo zvinozotendera kuti chibvumirano chisaderere, zvichipa izvo zvakatenderwa mukuvandudzwa kwevashandi. "
Chii chinonzi CCOO pamusoro pazvo?
CCOO yakaratidza kugutsikana kwayo nechibvumirano chitsva. CCOO yanga iri mubishi rekugadzira chibvumirano chakafanana kwenguva yakareba, kutsvaga mapurovhinzi nevashandi kuti vachengetedzwe muzvinhu zvakasiyana zvine chekuita nebasa nekushanda mukati mekambani yesimbi muSpain.
Zvirokwazvo nyowani musangano wesimbi Iyo inhanho yakakosha kune iyo indasitiri, kunyangwe pachine nzira refu yekufamba, kubva pano tinotanga kusvika mukutaurirana kuri nani mune ramangwana, uye izvi ndizvo zvinhu zvakazivikanwa neCCOO zvakakosha kucherechedza.
Mamwe akakosha mapoinzi mukati me Chibvumirano chevashandi.
Chibvumirano chakagadzwa uye chakasainwa maererano ne mubairo mudiki nechikamu chematunhu, izvi zvinoratidzwa muchibvumirano chega chega chematunhu. Chinhu chakakosha apa ndechekuti, kunyangwe hazvo chibvumirano chedunhu chakanganiswa nekuvimbika kana nguva yechibvumirano, ivo vacharamba vachipa yavo zvakajairwa muhoro kune vashandi uye vashandi mudunhu iri, vachidzivirira vanhu kubva mukukanganiswa neimwe mamiriro akaita seaya avasingazive zvachose zvikonzero.
Miganhu yakasimba yakagadziriswa kune mamwe mhedzisiro inokonzerwa neshanduko yebasa ra2012, chibvumirano chinodzivirira kuwanda kwezvibvumirano zvekambani yemasevhisi akawanda.
Humwe hwehunyanzvi hunoshandiswa neiyo mubatanidzwa Commission yechibvumiranoIzvi zvinobatsira chikamu chinobatana kutaurirana kuti chirambe chichiita.
Mukati mechibvumirano kuenzana kunovimbiswa kune vese vashandi, zvisinei bonde, zera, dzinza kana dzinza rinowanikwa nemunhu wacho. Matanho anodiwa anotorwa kuitira kuti tsika idzi dzizadzikiswe pakurwisa rusarura kuvanhu zvisinei nekuti ndivanaani.
Zvikonzero zvakatadzisa chibvumirano chakabatana
Zvimwe zvezvikonzero zvikuru zvakakonzera kunonoka kusaina zvibvumirano zvakagadziriswa nekukasira. Nekudaro, kune mamwe akange akaomesesa kugadzirisa.
Kunetsana kwakakonzera nekuda kwekusiyana kwemihoro yakajairika chimwe chezvikonzero zvakakosha chakakonzera kunetsana mukati mezvibvumirano, pamwe nemutemo wehukuru, kubvira muna Ndira 2015, 2007 pakanga paine kuwedzera kwehukuru uye zvainge zvatenderanwa kubvira gore XNUMX.
Mushure megore nemwedzi miviri yekutaurirana uye misangano yakawanda, chibvumirano chakaitwa, icho chinozotungamira mukusaina kwechibvumirano chakabatana. Yakasainwa nemakomisheni evashandi, ichipembedzwa neCCOO, vane 70% yekutaurirana.
Iyo simbi chikamu chakatova nechibvumirano chitsva chekubatanaMushure mekusainwa nemasangano evashandi, chibvumirano ichi chinosanganisira kukwidziridzwa kwemubhadharo kwevashandi vese mumataundi akasiyana eSpanish kana mapurovhinzi, chinova chinhu chiri pachena kuti chave kufarira vanhu avo vanoshanda mukati mebazi resimbi.
El simbi yesungano yakabatana inobata zvakanaka vanhu vazhinji, vashandi vazhinji vari kuita
Mabasa akasiyanasiyana mukati mekambani yesimbi, pamwe nekuwedzera kwemihoro uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu, hupenyu huri nani hwakavimbiswa kuvashandi kubvira pakasainwa zvibvumirano.
Izvo zvibvumirano zvichaita kuti zvikwanise kudzoreredza yakanaka yekushandira nharaunda kuitira kutora mitsva mitsva uye kuwedzera mutero. Izvi zvibvumirano zvichaisa hwaro hwekutaurirana kutsva mune ramangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Sangano rekubatana kwesimbi muSpain
Kutsvaga mibairo mikuru kunobatsira here kusevha kwedu?
Maitiro ane yakawanda yekukura kugona